Yaa fiican taageerayaasha Real Madrid iyo kuwa Juventus? – Higuain ayaa ka jawaabaya – Gool FM
Yaa fiican taageerayaasha Real Madrid iyo kuwa Juventus? – Higuain ayaa ka jawaabaya
Liibaan Fantastic February 2, 2017
(Torino) 02 Feb 2017 Weerar yahanka kooxda Juventus ee Gonzalo Higuain ayaa isbarbar dhig ku sameeyay taageerayaasha kooxdiisii hore iyo kooxdiisa haatan.
Gonzalo Higuain ayaa daaha ka qaaday in taageerayaasha Juventus aysan dhaqan u lahayn ku orinta ciyaartoyda kooxda si lamid ah taageerayaasha Real oo dhaqankaas ku caanbaxay.
29 jirkaan ayaa xaggaagii hore ku biiray kooxda Juventus markaas oo 90 milyan oo euro uu uga soo dhaqaaqay kooxda Napoli.
“U ciyaarida Juventus waxay u egtahay u ciyaarida Real Madrid, waxaad u ciyaaraysaa kaliya guul, taageerayaasha Juventus lama mid ahan kuwa Real, Inay ku fooriyaan ciyaartoyda kooxda ma ahan dhaqan lagu yaqaano” ayuu yiri Gonzalo Higuain oo la hadlay idaacada Onda Cero.
Mar wax laga waydiiyay kulanka u dhexeeya kooxihiisii hore ee Real iyo Napoli ayuu yiri:
“Jacayl badan ayaan u qabaa labada kooxood, dabcan kooxda Maurizio Sarri inbadan ayeey isbadashay marwalbana wuxuu isku dayayaa inuu hagaajiyo kooxda, halkaan iyo halkaasba asxaab ayaan ku leeyahay sidaas darteed waxaan rajaynayaa inay guulaysato kooxdii fiican”.